World Up To Date - Ny vaovao tsara indrindra ANIO
Tovolahy iray 14 taona no namely totohondry ny voay mba handosirana rehefa nohidin’ilay bibidia teo amin’ny valanoranony ilay zatovo ary niezaka nitaritarika azy ho faty.
Jona 2, 2022 ny Admin
Nandositra tamin’ny fomba mahagaga ny valanoranon’ny voay ny zatovo iray tamin’ny fikapohana azy teo amin’ny lohany. Om Prakash Sahoo, 14 taona, dia niaraka tamin'ny namany tany amin'ny Reniranon'i Kani any India rehefa nopotehin'ilay bibidia tany anaty rano ary notaritaritina ho faty. 1Tafaporitsaka teo amin’ny valanoranon’ny voay ilay zatovoBola: Alamy... hamaky bebe kokoa
Sokajy Vaovao farany Tags zatovo, taona, sariho izany, Beast, Cara, alligator, avy eo, mihidy, Entre, afa-mandositra, valanorano, voa, ny, fahafatesana, zaza, for, ny, momba ny Leave a comment
Nandositra tamin’ny fomba mahagaga ny valanoranon’ny voay ny zatovo iray tamin’ny famelezana azy teo amin’ny lohany. Om Prakash Sahoo, 14 taona, dia niaraka tamin'ny namany tany amin'ny Reniranon'i Kani any India rehefa nopotehin'ilay bibidia tany anaty rano ary notaritaritina ho faty. 1 Nandositra ny valanoranony ilay tovolahy… hamaky bebe kokoa
Nandositra niala tamin’ny fianakaviako Amish aho, tamin’izaho 18 taona
Renim-pianakaviana iray nobeazina tao Amish dia nanambara ny fomba niharan'ny fanararaotana ara-nofo mahatsiravina sy "nalavirana" ny vehivavy sy ny ankizy raha mandika ny fitsipika izy ireo. Rehefa nandositra ny hany fiainana fantany teo amin'ny faha-36 taonany i Emma Gingerich, 18 taona, dia nianatra tao amin'ny kilasy fahasivy fotsiny izy ... hamaky bebe kokoa
Sokajy Vaovao farany Tags Amish, taona, rehefa, afa-mandositra, family, olom-pady, nanana Leave a comment
Mistery amin'ny maha injeniera britanika 37 taona notifirina niaraka tamin'ny namany roa tao amin'ny toeram-pivarotana Meksikana iray teo am-pivarotana
Lehilahy britanika iray no maty voatifitra tao amin'ny toeram-pivarotana Meksikana iray niaraka tamin'ny namany roa, rehefa nilaza ny ray aman-dreniny very hevitra fa 'eny amin'ny toerana tsy mety amin'ny fotoana tsy mety'. Ben Corser injeniera, 37 taona, avy any Cornwall, dia voatifitra teo am-panaovana raharaha tany Colima, andrefan'i Mexico, tamin'ny… hamaky bebe kokoa
Sokajy Vaovao farany Tags Amigos, taona, novonoina, anglisy, como el, nividy, amin'ny, indray, injeniera, Meksika, raha mbola, zava-miafina, fivarotana lehibe, fitifirana Leave a comment
Ny antsantsa 'Zombie' dia manafika remby santimetatra avy amin'ny mpisitrika taitra
Izao no fotoana mampatahotra ny antsantsa "zombie" manafika ny rembiny avy amin'ny antsitrika gaga, ary mitovy ny teny lazain'izy ireo. Euan Rannachan, 36 taona, dia tao amin'ny Nosy Guadalupe, tokony ho 200 kilometatra miala ny morontsirak'i Meksika, rehefa niseho ilay antsantsa fotsy lehibe ary nijanona tao anaty rano. … hamaky bebe kokoa
Sokajy Vaovao farany Tags fanafihana, taitra, mpisitrika, santimetatra, presa, antsantsa, Zombie Leave a comment
Notsaboina noho ny 'kanseran'ny fandrosoana tamin'ny volana aprily' i Putin satria 'mety ho akaiky ny farany' ho an'ny mpanao jadona Kremlin, hoy ny lehiben'ny mpitsikilo amerikana.
NARARATSY i Vladimir Putin dia notsaboina noho ny homamiadana efa mandroso tamin'ny volana aprily, hoy ny lehiben'ny mpitsikilo amerikana. Nilaza ny tompon'andraikitra ambony fa “mahatsapa fa akaiky ny farany” ho an'ilay mpanao didy jadona Rosiana 69 taona ireo mpanampy ao Kremlin. 2Ny filoha Rosiana Vladimir PutinCredit: AP 2Putin nihaona tamin'i Boris Titov, solontenan'ny… hamaky bebe kokoa
Sokajy Vaovao farany Leave a comment
Inona no atao hoe rhinoplasty ary inona no tombony azony?
Jona 2, 2022 Jona 2, 2022 ny Admin
Noho ny antony ara-pahasalamana na hatsarana, ny rhinoplasty dia safidy azo atao amin'ny fanavaozana na fanamboarana ny orona. Mihabetsaka ny olona mitodika amin'io fomba fiasa io mba hamahana olana manokana amin'ny orona. Inona marina anefa izany ary inona no tombony lehibe indrindra? Ny lahatsoratra anio dia mikendry ny hanazava ny… hamaky bebe kokoa
Inona no atao hoe varotra ary inona izany?
Ny tombom-barotra amin'ny varotra dia mihoatra noho ny faniriana, satria ilaina ny teknika izay manampy amin'ny zavatra tiana ho tratrarina. Amin'izao fotoana izao, ny marketing dia mampiasa fahalalana samihafa izay noraisina nandritra ny taona maro mba hanentanana ny fividianana mpanjifa. Ny varotra ho an'ny orinasa dia… hamaky bebe kokoa
Barack Obama dia nitarika ny Jobily Platinum ho an'ny Mpanjakavavy manerana izao tontolo izao rehefa nandefa hafatra ny Papa sy Macron
BARACK Obama dia nilaza fa "mampahatsiahy ahy ny renibeko" ny mpanjakavavy rehefa niarahaba ny mpanjaka tamin'ny faha-70 taonany teo amin'ny seza fiandrianana ireo olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ilay 96 taona no mpanjaka britanika voalohany nankalaza ny jobily platinum ary ireo mpankafy mpanjaka eran-tany dia manana... hamaky bebe kokoa
Nanolana tao anaty lamasinina tamin'ny alalan'ny inspektera tapakila sy ny telo hafa i Neny rehefa voasariky ny kilasy voalohany
Renim-pianakaviana iray no voalaza fa naolana tao anaty fiarandalamby nataon’ny mpanara-maso ny tapakila sy lehilahy telo hafa rehefa voasariky ny sarety voalohany. Nandao ny sezany tao amin’ny kilasy ekonomika ity renim-pianakaviana tanora roa manan-janaka roa ity rehefa nomena efitrano misy rivotra nandritra ny... hamaky bebe kokoa
pejy1 pejy2 ... pejy1.358 manaraka →
World Up To Date | 2022